कसरी पुर्‍याउने स्वास्थ्यमा सबैको पहुँच?
आईएमई इन्सुरेन्सले ल्यायो बालकिरण जीवन बीमा योजना
पेटमा अड्किएको चम्चा शल्यक्रिया विना निकालियो
काठमाडौंमा हैजाका बिरामी बढ्दै, १२ जनामा पुष्टि
नवनियुक्त मन्त्रीले लिए पद तथा गोपनीयताको शपथ
दाङका दुई महिला सीमा क्षेत्रको भारतीय बजारमा बलात्कृत
खोइ राष्ट्रिय योजना?
पूर्वाधार बनाउँदा पन्छी जोगाउन ‘इसेन्सेटिभिटी म्यापिङ टूल’ निर्माण
पूर्वाधार निर्माणका क्रममा हुने पन्छी तथा अन्य प्राणीको क्षति हुनबाट जोगाउन ‘इसेन्सेटिभिटी म्यापिङ टूल’ तयार गरिएको छ।
प्राकृतिक प्रकोपबाट जोगाउन प्रभावमा आधारित मौसम पूर्वानुमान
मौसम पूर्वानुमानलाई प्रभावमा आधारित बनाइए सम्भावित विभिन्न प्रकोपमा जनधनको क्षति उल्लेख्य रूपमा घटाउन सकिन्छ।
बढ्दो मागले प्राकृतिक स्रोत जोगाउन चुनौती
जैविक विविधता तथा उपयोगिता सम्बन्धी पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनका वक्ताहरूले प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण गर्दै अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
शहरिया रूखकाे इतिहास खोजी ऐतिहासिक रूख अभिलेखीकरण गर्ने ललितपुर महानगरको अभियानले सम्पदाको परिभाषालाई फराकिलाे बनाउँदै मानव र प्रकृतिलाई नजिक ल्याउने पहल गरेको छ।
पाँचथर–चितवन पुगेको मोरङ्गेको खोजी आदिवासीहरूले उपयोग गर्दैै आएको मोरङ्गे वनस्पति संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ।
चितवनमा भेटियो नयाँ प्रजातिको चरा चितवनमा नयाँ प्रजातिको चरा भेटिएको छ। नेपाल पक्षीविद् संघ बागमती प्रदेशका अध्यक्ष वासु बिडारीले खैरहनी नगरपालिका–११ पिडहनी क्षेत्रको धानबारीमा नयाँ प्रजातिको चरा भेटिएको जानकारी दिए।
रेड पान्डाको विचरण-विमर्श सुन्दर जीव रेड पान्डा लोप हुन नदिने हो भने यसको वासस्थान संरक्षणमा तत्काल पहलकदमी जरुरी भइसकेको छ।
चिनौं घर छिमेकका चरा जबसम्म सर्वसाधारणले प्राणी प्रजातिप्रति सद्‌भाव राख्दैनन् तबसम्म संरक्षण प्रभावकारी हुन सक्दैन। आम मानिसलाई प्रजातिबारे थाहा दिनु नै संरक्षणतर्फको पहिलो पाइला हो।
किन सङ्कटमा पर्दै छ वन कुकुर? वासस्थान अतिक्रमण, आहाराजन्य प्रजातिको कमी, विष तथा पासो थापेर मार्ने प्रवृत्ति वन कुकुर संरक्षणका लागि चुनौती बनेका छन्।
किन बुझ्ने बाँदर? बढ्दो मानव-बाँदर द्वन्द्वको दीर्घकालीन समाधान गर्ने हो भने सन्तुलित वनको अवधारणा नअपनाई सुखै छैन।
सिद्धार्थ गौतमले जोगाएका सारसको कसले गर्ने संरक्षण? सिद्धार्थ गौतमले हाँसलाई मल्हमपट्टी गर्छन्। त्यसलाई निको पारीवरी स्वस्थ्य भएपछि केही दिनमा जङ्गलमा छोडिदिन्छन्। बुद्ध कथाहरूमा पाइने याे किंवदन्तीमा उल्लिखित ‘उड्ने हाँस’ लुम्बिनी क्षेत्रमा पाइने सारस भएको विज्ञहरू बताउँछन्।
बचेरा कोरल्दै आगन्तुक चरा अधिकांश चराको बच्चा कोरल्ने समय वैशाख-जेठ हो। यहि समयमा आगन्तुक चरा नेपाल आउने गरेका छन्।
झिलिमिली उज्यालो चरालाई चुनौती पृथ्वीमा दुई प्रतिशतका दरले अनावश्यक मानव निर्मित कृत्रिम उज्यालो बढ्दै गएको छ। जसको प्रतिकूल प्रभाव बसाइँसराइ गर्ने चराहरूलाई परेको छ।
बाघको आक्रमणमा वृद्धको मृत्यु बाघको आक्रमणमा परेर चितवनको खैरहनी नगरपालिका–१३ बैरियाका ६५ वर्षीय नारायण दाहालको मृत्यु भएको छ।
एशियामा हात्ती जोगाउन काठमाडौं घोषणापत्र जारी सहकार्य र नीतिगत आधारमा जोड दिइएको काठमाडौं घोषणापत्र जारी गर्दै तेस्रो ‘एशियन इलिफेन्ट रेन्ज स्टेट मिटिङ’ सम्पन्न भएको छ।
हात्ती जोगाउन दर्जन देशका प्रतिनिधिको चासो
रिपोर्ट महेश्वर आचार्य
जमीनमा हुने सबैभन्दा ठूलो प्राणी हात्ती जोगाउन विश्वका विज्ञ काठमाडौंमा भेला हुने भएका छन्।
लिमीमा पनि भेटिए ‘स्टिप पोलक्याट’, पालास र पाहन बिरालो
संरक्षण क्षेत्र बाहिर पनि मांसाहारी वन्यजन्तु प्रजातिका ‘स्टिप पोलक्याट’, पालास र पाहन बिरालो भेटिएका छन्।
इलाममा टिकटिके झारको प्रकोप
हाइपोएस्टिस जाति अन्तर्गतको टिकटिके झारले खेती–किसानीमा समस्या पारिरहँदा यसको नियन्त्रणमा सरकारी अग्रसरताको खाँचो देखिएको छ।
स्थानीय सरकार: संरक्षणमा गतिलो सक्रियता स्थानीय सरकारहरूले वन्यजन्तु र पर्यावरण संरक्षणमा चासो देखाउँदै उदाहरणीय काम गरेका छन्।
डंगर प्रजातिका गिद्ध प्राकृतिक वासस्थानमा छोडियो गिद्ध संरक्षण तथा प्रजनन केन्द्रमा जन्मिएका गिद्धलाई हुर्काएर प्राकृतिक वासस्थानमा छोडिएको छ।
देशभर पश्चिमी प्रणालीको प्रभाव, यस्तो छ तीन दिनको मौसम पश्चिमी न्यून चापीय प्रणालीका कारण आगामी तीन दिन देशका विभिन्न भागमा मेघ गर्जन सहित वर्षाको सम्भावना रहेको छ।
रूख चिनौं फूल र फल लाग्ने वनस्पतिमा मात्र अध्येताहरूको ध्यान जाँदा नेपालका कैयन् रूख प्रजाति चिन्नै सकिएको छैन।
वायु प्रदूषणको प्रकोप ! सामान्य ठानिएको शीतलहरले पछिल्ला वर्षमा पुर्‍याउन थालेको अनपेक्षित क्षतिले निकट भविष्यमा यो प्रकोप नै बन्ने सक्ने जोखिम देखिन्छ।
बाघ गणनाका लागि राखिएका १७ क्यामरा चोरी बाघ गणनाका लागि बाँके र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा राखिएका १७ क्यामरा चोरी भएका छन्।
संरक्षणकर्मी पौडेललाई अन्तर्राष्ट्रिय फेलोसिप संरक्षणकर्मी कुमार पौडेलले अन्तर्राष्ट्रिय फेलोसिप पाएका छन्।
स-साना कमजोरीले मरे सात महीनामा २० गैंडा भरतपुरको सडक किनारको खाल्डोमा परेर आइतबार बिहान एक गैंडा मरेको अवस्थामा भेटियो। यस्तै स-साना कमजोरीले गत सात महीनामा २० गैंडा मरेका छन्।
प्रस्तावित वन नियमावलीको सामुदायिक वन उपभोक्ताद्वारा विरोध वन तथा वातावरण मन्त्रालयले सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिले अहिलेसम्म उपभोग गर्दै आएका केही अधिकार खोस्ने गरी नियमावली प्रस्ताव गरेपछि सामुदायिक वन र मन्त्रालयबीच द्वन्द्व बढेको छ।
पहाडमा पनि पानीका मुहान सुक्ने समस्या, चुरे क्षेत्रमा अत्यधिक पहाडी क्षेत्रमा पर्ने तीन सय स्थानीय तहमा गरिएको एक अध्ययनले ७४ प्रतिशत स्थानीय तहमा पानीका मूल सुक्ने समस्या रहेको पाइएको छ।
मुस्ताङमा पर्वतीय वकालत सम्मेलन हुने पर्वतीय क्षेत्रले भोग्नु परेका समस्या र चुनौतीबारे राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गर्ने उद्देश्यले मुस्ताङमा ‘माउन्टेन एड्भोकेशी समिट’ (पर्वतीय वकालत सम्मेलन) आयोजना हुने भएको छ।
यसरी गरिंदै छ देशभर बाघको गणना देशभरका बाघ पाइने संरक्षित क्षेत्र र आसपासमा आजदेखि बाघ गणना गर्न थालिएको छ।